2017 April 07 | PuntlandTimes- Wararkii ugu dambeeyey Puntland iyo Somalia
AKHRISO:- Wadankii Ugu Horeeyay Oo Dadkiisa U Fasaxay Isticmaalka Iyo Iibinta Daroogada Loo Yaqaan ‘Xashiiska’ Iyo Farmashiyaasha Oo Lagu..
MONTEVIDEO(P-TIMES)-Dalka Uruguay oo ka tirsan dalalka ku yaalla koonfurta qaarada Amerika ayaa noqday dalkii ugu horeeyey caalamka ee shacabkiisa u fasaxa ka ganacsiga iyo isticmaalka daroogada Xashiishka loo yaqaano. laga bisha Luulyo ee sannadkan, ayaa sharci laga dhigi doonaa in shacabka dalka Uruguay ay xashiishadda ka iibsan karaan farmashiyeyaal gaar ah oo ruqsad ama fasax […]
DEG DEG+FAAHFAAHIN: Madaafiic sababay dhimashada 11 qof oo ka dhacay goor dhaw Muqdisho & Shacabka oo soo xasuustay Ayaamihii Itoobiyaanka
MUQDISHO(P-TIMES) – Wararka naga soo gaaraya magaalada Muqdisho ee caasumada Soomaaliya ayaa sheegaya in madaafiic laga maqlay xaafadaha qaarkoodna ku soo dhacay ay ku dhinteen in ka badan 11 qof oo shacab ah, waxaana madaafiicdan laga soo dhex ridey gudaha magaalada. Sida ay sheegayaan wararka khasaaraha ka dhashay madaafiicdan hoobiyeyaasha ayaa aheyd tii ugu khasaaraha […]
DEG DEG: Madaxweynaha Puntland oo ku dhawaaqay war ku saabsan Dhismaha Madaarka Gaalkacyo
DUBIA(P-TIMES)- Madaxweynaha maamulka Puntland Dr Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo ka hadlayey xalay casho lagu qabtay magaalada Dubia ee dalka Isku taga Imaaraatka Carabta ayaa sheegay in kaabayaasha dhaqaalaha ee dhismaya ay yihiin kuwa horey u dhaqaajinaya dawladnimada Puntland. Madaxweynaha Puntland wuxuu sheegay in ay dawladdiisu dhaxal uga tagi doonto Shacabka Puntland, gaar ahaana dhismaha […]
DHAGEYSI XASAASI AH: Galmudug oo digniin culus u dirtay Madaxda dawladda Faderaalka Soomaaliya
CADAADO(P-TIMES)- Gudoomiyaha Maxkamadda Sare ee Galmudug ayaa uga digay Madaxda dawladda Faderaalka ee Muqdisho in ay cadaawad ka dhex abuuraan qabaa’ilada maamulkaas ku midobay, loona baahan yahay in ay faraha kala baxaan arimaha siyaasada. Gudoomiyaha ayaa sheegay in ay jiraan faragalin toos ah oo ay xubnahaas ku hayaan hanaanka shaqo ee guddiga Doorashada & Jadwalka […]
DAAWO SAWIRRO:- Difaacyadii Ay Ciidamada Itoobiya Ku Lahaayeen Hareeraha Degmada Ceel-buur Ee G. Galgaduud
CEEL-BUUR(P-TIMES)-Ciidamadii Itoobiya ee maalmo ka hor ka baxay degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud ayaa degmadaas ku lahaa goobo difaacyo ah oo ayku sugnaayeen sadexdii sano ee ay joogeen halkaas. Difaacyada ay ka baxeen ciidamada Itoobiya ayaa badankood waxay ku yaalleen hareeraha magaalada Ceelbuur. Ciidanka Itoobiya ayaa magaalada ka deganaa dhanka galbeed waxayna difaacyo waaweyn ka […]
DAAWO: M/weynaha Mareykanka oo amar deg deg ah siiyey ciidamadiisa kusugan Agaagarka Siiriya & Gantaalo la riday
Dowladda Mareykanku ayaa duqeyn ka geystay dhowr saldhig ciidan oo Suuriya ku yaalla xalay, taas oo jawaab u aheyd weerar kiimiko oo arxan darro ahaa oo lagu qaaday dad rayid ah maalmo ka hor kaas oo lagu eedeyay xukuumadda Bashar al-Assad. Weerarkaas ayaa waxaa ku dhintay in ka badan boqol ruux. Waa weerarkii ugu horreeyay […]
FALANQEYTA JIMCAHA: M/weyne Farmaajo iyo Dadkii shalay la magacaabay maxaa ka dhaxeeya? Yeyse Siyaasad ahaan taageersanayeen?
MUQDISHO(P-TIMES)- Si weyn ayaa maanta loo hadal hayaa Isbedelkii lagu sameeyey halmar Taliyaasha ciidamada dawladda Faderaalka Soomaaliya & Mareeyaasha Ilaha dhaqaalaha ee gobalka Banaadir, taas oo keentay walaac balaaran oo ay dadka qaarkood qabaan. Shaqo ka ceyrinta si wadar guud ah Taliyaasha ciidamada kala duwan ee dawladda Faderaalka ayaa cabsi laga qabi karaa in ay […]
DHAGEYSI XASAASI AH: M/weynaha Puntland oo faahfaahin ka bixiyey Heshiiska uu la saxiixda DP World..
DUBIA(P-TIMES)- Madaxweynaha maamulka Puntland Dr Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa faahfaahin dheeraad ah ka bixiyey heshiiskii uu shalay la saxiixday shirkada laga leeyahay dalka Isku taga Imaaraatka Carabta ee DP World, oo ku aadan maalgalinta dekeda magaalada Boosaaso. Madaxweynaha Puntland ayaa ku sifeeyey heshiiskan dhabaha u xaaraya maalgalin caalami ah, wuxuuna sheegay in uu yahay […]
XOG XASAASI AH+AKHRISO: Maxaa xalay dhexmaray M/weyne Farmaajo & Safiirka Imaaraatka Carabta ee Somalia?
MUQDISHO(P-TIMES)- Warsidaha Puntlandtimes ayaa ogaaday in uu shir khaas ah xalay dhexmaray madaxweynaha dawladda Faderaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo & Safiirka dawladda Imaaraatka Carabta u jooga Soomaaliya, kaas oo ay si adag uga wada hadleen arrimaha Siyaasadeed & Iskaashiga labada dhinac. Shirkan oo ahaa mid khaas ah ayaa si gaar ah u dhexmaray Safiirka Imaaraatka […]